Tiro-Koobyo Iyo Xaqiiqooyin La Xidhiidha Ciidamada Maraykanka Ee Afrika Ku Sugan Iyo Jabuuti & Somalia Oo Noqday Kuwa Tirada Ugu Badani Ka Joogaan | FooreNews
Home wararka Tiro-Koobyo Iyo Xaqiiqooyin La Xidhiidha Ciidamada Maraykanka Ee Afrika Ku Sugan Iyo Jabuuti & Somalia Oo Noqday Kuwa Tirada Ugu Badani Ka Joogaan
Tiro-Koobyo Iyo Xaqiiqooyin La Xidhiidha Ciidamada Maraykanka Ee Afrika Ku Sugan Iyo Jabuuti & Somalia Oo Noqday Kuwa Tirada Ugu Badani Ka Joogaan
FoorenewsFeb 15, 2018wararka0
Djibouti, February 15, 2018- (Foore)- Ciidamada Waddanka Maraykanka oo sida la aamisan yahay ah kuwan adduunka ugu horreeya wakhtigan dhinaca awoodda ciidan, marka loo eego dalkooda ah oo ah quwadda wakhtigan adduunka ku amar ku taaglaysa kadib burburkii awooddii kale ee Warsaw, ayaa waxa ay saldhigyo kala duwan ku leeyihiin daafaha adduunka, inta la og yahay iyo inta qarsoodiga ah ee aan la ogaynba. Waxaana goobaha ay wakhtigan Ameerikaanku sal-dhigyada ku leeyihiin ee ciidamadu ka joogaan ka mid ah Geeska Afrika oo ah mandaqad istaraatiiji ah oo Maraykanku si gaar ah u danaynayo, Guud ahaanna qaaradda Afrika ciidamo badani ka joogaan.
Xogaha uu Arrinkan ka soo ururiyey Wargeyska Foore waxa ay tibaaxayaan in xogtii ugu dambaysay ee laga hayo tirada ciidamada Ameerikaanka ah ee ku sugan qaaradda Afrika sannadkii 2017 ay dhan tahay in ka badan 8000 oo askari oo qaaradda Afrika kaga sugan meelo kala duwan waxaana la xaqiijiyey in dalka Jabuuti tirada ugu badani ka Joogaan halka ay Soomaaliya noqotay kaalinta saddexaad oo dalka Niger ay kaalinta labaad ku jirto.
Tirada Ciidamada Iyo Dalalka Ay Kala Joogaan:
1. Jabuuti – 2000 oo askari
2. Niger – 800 oo askari
3. Somalia – 400 oo askari
4. Cameroon – 100 askari
5. Uganda – 56 askari
Balse waxa la aaminsan yahay in tirada Soomaaliya ka joogtaa intaasi ka badan tahay.
Hawl-galka Ciidamada USA ee AFRICOM:
Hawlgalka Ciidamada Maraykanka ee AFRICOM oo ah Hawl-gal Milatari oo ciidamada Ameerikaanku ku wajahaan qaaradda Afrika waxa la aasaasay sannadkii 2007 waxaanay xaruntiisa guud ku taallaa deegaanka Kelley Barracks oo ah tuulo yar oo u dhaw Magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka.
Hawl-galka AFRICOM waxa waxa uu qayb kale oo muhiim ah ku leeyahay dalka Jabuuti waxaana la yidhaa saldhigga Kaam Lemonnier ama “Camp Lemonnier’ waxaana la sheegaa in ay wakhtigan ku sugan yihiin in ka badan 2000 oo askari. Waana saldhigga ugu muhiimsan ee Ameerikaanku ku leeyahay Afrika. Hawl-gallada AFRICOM waxa loo kala qaybiyaa oo ay ku wajahan yihiin shan degmo-qaaradeed oo kala ah:
1. Woqooyiga Afrika
2. Galbeedka Afrika
3. Bariga Afrika
4. Badhtamaha Afrika
5. Koonfurta Afrika
Shantaa deegaanba waxa ay ku leeyihiin Sal-dhig Goboleedyo balse saldhigga Jabuuti waa mid ka weyn kuwaasi. Saldhig-Goboleedyada haddii aan soo qaadano waxa ka mid ah: Saldhigga ay Ameerikaanku ku leeyihiin Gobolka Agades ee badhtamaha dalka Niger waana saldhig loogu tala galay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee wax duqeeya, waxna basaasa. Sidoo kale saldhig kan oo kale la mid ah waxa ay ciidamada Maraykanku ku leeyihiin Gobolka Garu ee Woqooyiga dalka Camaroon. Waxa ay labadan saldhigba ku wajahan yihiin weerarrada Maraykanku ku bartilmaameedsado kooxda Boko Xaraam.
Hawl-gallada Ciidamada Ameerikaanku ka fuliyaan Afrika:
Hawl-gallada ugu badan ee ay Fuliyaan waxa ka mid ah la dagaalanka kooxda Alshabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya iyo Kenya. Waxa ay sannad walba qorsheeyaan duullaanno dhinaca cirka ah oo ay ku bar-tilmaameedsadaan saldhigyo Al-shabaab iyo goobaha ay ku sugan yihiin madaxda Al-shabaab. Sidoo kale hawl-gallada Ay Afrika ka fuliyaan waxa ka mid ah la dagaalanka kooxda Boko Haram ee ka dagaalanta Galbeedka Afrika. Waxa ay kooxdan kaga soo duulaan saldhigyada ay ku leeyihiin dalalka Niger iyo Cameroon. Sida Al-shabaab oo kale ayay dhinaca cirka ka bartilmaameedsadaan. Waxaanay sidoo kale hawl-gallo ka fuliyaan dalka Libya oo ay ku bartilmaameedsadaan kooxo islaamiyiin ah. Ugu dambayn dalka Uganda waxa ay ka sameeyeen hawlgal ay ku soo qabanayeen Hogaamiyihii Mucaarad ee Joseph Kony.
Previous PostXannuuno Ka Dilaacay Degmada Allaybaday, Tiro Carruur Ah Oo U Dhimatay Iyo Gudoomiyaha Degmada Oo Qaylodhaan Kasoo Saaray Next PostMilicsiga Taariikhda Faneed Ee Cabdi Cali Bacalwaan: Mid Ka Mid Ah Fannaan- iintii Loogu Jeclaa Hoballada Waaberi - Q:4aad